Okungenani amashumi eminyaka edlule emhlabeni wonke, izingxabano mayelana nokuthi yimaphi amafutha - izilwane noma imifino iyasiza emzimbeni, futhi ewusizo nhlobo - awuyeki. Kwabikwa ukuthi ibhotela liyingozi kakhulu. Ngokungazelelwe kwacaca ukuthi imifino yayingeyena engcono. Futhi ku-margarine, umkhiqizo, ngombono, omelela isiphambano phakathi kwalababili, isimo sengqondo sishintshile ngalesi sikhathi izikhathi eziningana. Ngakho-ke, eziningi zezinsikazi, ziyeza esitolo, zizindla ngokubuhlungu, zimi phambi kwe-counter: yini ongayithenga endlini, ngakho-ke ukuthi iyinambitha futhi iyasiza kuwo wonke umndeni?
AKUKHO I-TOO FAT?
Ukuqala ngakho kuyasiza ukuqonda lokhu okulandelayo: inani lokudla okunomsoco wamafutha namafutha alinakunqunywa. Phela, amafutha, njengeklasi yezakhi, asemqoka kakhulu emzimbeni womuntu njengamaprotheni ane-carbohydrate. Okokuqala, amafutha angumthombo wamandla, anciphisa inqubo yokuguga, ukusiza ukugcina ingculazi. Futhi ucabanga kanjani, ngenxa yokuthi izinwele zethu nezikhumba zibukeka zihle futhi zikhangayo? Kulungile, ngezindleko zamafutha!
Okwesibili, umzimba okhulayo ongenawo amafutha awukwazi ukuthuthukisa kahle. Ikakhulukazi ubuchopho. Futhi, okwesithathu, amafutha asisiza umzimba ukuba wehle futhi uhlanganise izinto eziningi eziwusizo, ikakhulukazi amavithamini. Okusho ukuthi, awukwazi ukuwashiya ngaphandle kokudla kwakho nhlobo.
YEBO UHLU LOKUPHAKATHI!
Ibhotela yemvelo isetshenziswe isintu kusukela ezikhathini zasendulo. Inganekwane yokulimala kwakhe okungajwayelekile kwazalwa kungekudala. Futhi kwavela ngezindlela eziningi, ngoba kukhona amafutha abantu abaye bavame kakhulu, baqondiswa kuphela ngama-predilections abo, futhi akukho mithetho yesonto, njengangaphambili. Kodwa isimiso sokuzila kanye nezinsuku okusheshayo ngonyaka akuzange kuvele kusukela ekuqaleni. Akusekelwe kuphela emibonweni ethile yeqiniso ngaleli zwe, kodwa futhi nolwazi oludala kakhulu mayelana nokugcinwa nokugcinwa kwempilo yomzimba womuntu. Ngakho-ke kunengqondo kakhulu ukukhuluma ngezingozi zamafutha anjalo, kodwa ngokusetshenziswa kwawo ngokweqile. Isilinganiso ngaso sonke isikhathi sidingeka futhi kukho konke.
Uma ubheka ibhotela ngenhloso, isithombe siyindlela elandelayo. Ibhotela lemvelo liqukethe amavithamini amaningi, ama-amino acid nezinye izakhi, ngaphandle kokuthi umzimba awukwazi ukusebenza ngokugcwele, futhi awutholakali kwezinye ukudla. Inani layo lokudla okunomsoco liphakeme kakhulu. Nakuba usebenzisa njalo umkhiqizo awunawo umphumela omuhle endleleni yokugaya ukudla, ikakhulukazi isibindi, isimiso sezinsiza, njll. Kodwa-ke, abanye ochwepheshe bathi iningi lezinkinga zezempilo ezibhekiswe kubhotela, kwenzeka kuphela uma umkhiqizo ulungiswa ngokuphula ubuchwepheshe noma uma ugcinwa ngokungalungile.
Isiphetho esivela kuzo zonke lezi zici sibheka elula. Okokuqala, kukhona ibhotela ukuba lingabi njalo futhi kancane kancane. Futhi, okwesibili, kubalulekile ukukukhetha esitolo ngokunakekelwa okukhethekile.
Uma uthatha i-axiom ukuthi ibhotela ayamukelekile nsuku zonke etafuleni, kuphakama umbuzo ozwakalayo: yini okufanele usakaze ngesitsheni samasiko ukuze uthole ukudla kwasekuseni, ufake inhlama (uma uvame ukubhaka amapeyi), uyifake kumazambane ahlambulukile kanye nephalishi? Phela, amafutha yemifino (umkhiqizo ongenakusiza kakhulu kunomuntu ophuzile) awukuthi ube yingxenye kuwo wonke amacala. Kukhona ngemva kwakho konke akukho amafutha "okudingekayo". Futhi yilapho umqondo wemikhiqizo ibhotela ehlanganisiwe, esiyibiza ngokuthi ama-margarine, ufika engqondweni. Imikhiqizo ewusizo kunawo wonke yimikhiqizo, eyinhlanganisela yobisi oluphephile kanye namafutha omquba.
Kodwa-ke, kusukela ekubukeni kwezingcweti, imikhiqizo kuphela eyenziwe ngamafutha yemifino yemvelo ibhekwa njengama-margarine ngokuzwakalayo kwezwi. Emangarini amanje ngokuvamile afaka imikhiqizo yobisi, amaprotheni wemifino, amanzi, amavithamini ahlukahlukene kanye nezinye izakhi ezinempilo. Okuqukethwe kwamafutha akusikho ngaphansi kwamaphesenti angama-40. I-cholesterol ayincane noma cha. Kukhona ngisho nezinhlobo zokudla zama margarini, oklanyelwe ukuvimbela izinhlobo ezithile zezifo.
Kodwa inkinga ukuthi emashalofini wezitolo ungathola uchungechunge lonke lwemikhiqizo, ngaphandle nangaphandle kwezakhiwo ezifana kakhulu negargarine, kodwa ehlukile ekubunjweni. Isibonelo, inhlanganisela yamafutha omuncu anamafutha anomsoco (isundu, isikhonkco, njll), ibhotela namafutha ezilwane. Ngeshwa, imakethe ngezinye izikhathi ithola imikhiqizo "ephikisiwe", okungukuthi, eyenziwa ngamabhizinisi amancane angaphansi komhlaba. Iziphi izithako ezisetshenziselwa abakhiqizi abangenangqondo, yimuphi umsoco wemikhiqizo enjalo - umuntu angaqagela kuphela. Lokhu kungaba amafutha okufakelwa, okulungiselelwe ukusetshenziselwa kwamakhemikhali amafutha asitshalo angabizi noma okudlulile, namafutha ezilwane zasolwandle noma inhlanzi. Yebo, awukwazi ukuthi yiziphi ezinye "izingcweti" ezingangeza kulokho!
Futhi akukona ukuthi ukuthenga i-margarine emvelaphi engaqiniseki, umthengi ufika esibhedlela ngokushesha ngesifo sofuba sokudla (lokhu kwenzeka ngokungajwayelekile). Iqiniso liwukuthi, lokhu kuwusizo kanjani noma ukuthi umkhiqizo wokudla. Kunezinhlanganisela ezinjalo ezingathandeki kakhulu ekudleni, isibonelo, ezinganeni noma kubantu abagula ngezifo ezithile ezingapheli.
Kwamanye amazwe, kunethuba elingaphansi lokuthenga umkhiqizo wamafutha wemvelaphi engaziwa. Lapho, kulolu phuzu, kunezindinganiso eziqinile, okufanele zihambisane nabakhiqizi. Futhi ngenxa yokungahambisani nemithetho enjalo, izinyathelo ezinkulu kakhulu zibhekelelwe, kuze kufakwe futhi kuhlanganise nokususwa kwelayisense. Ngakho-ke, ngokusho kwamazinga aseYurophu, amafutha angabhekwa nje njengomkhiqizo oqukethe amaphesenti angama-82,5 amafutha avela ubisi lwezinkomo ngaphandle kokusetshenziswa kwanoma yikuphi ukwelashwa kwamakhemikhali. Imikhiqizo yamafutha ekulungiseleleni ama-sandwich noma ibhikawoti inegama lawo siqu, isibonelo, isakazeka, izingxube, njll. Ilebula kufanele ibe nesibonakaliso sokudla okunomsoco wamafutha namafutha, uhlu lwezithako futhi ngokuvamile amaphesenti abo. Ngakho-ke, umthengi angahamba kalula futhi akhethe umkhiqizo wekhwalithi oyifunayo.
E-Russia, ngeshwa, ngisho ne-GOST enamandla onke ayikwazi ukuvikela ngokuphelele umthengi. Sula imithetho nemithetho ehlangabezana nezindinganiso zomhlaba zingaphansi kokuthuthukiswa. Ngakho-ke, kuyilapho kufanelekile ukutadisha ngokucophelela ukufakwa kwemikhiqizo ethengiwe futhi ukhumbule ezinye izinto.
✓ Uma i-bhotela elibhekene ne-counter phezulu liluhlaza okwedlulele kunaphakathi, noma ngesikhathi sokusika ubona izendlalelo, izihlukaniso zombala ohlukile kunombimbi - zigwema ukuthenga.
✓Konke amafutha owathenga akufanele adliwe uma: uzizwe uthola iphunga elimnandi noma elimnandi. I-aftertaste ebabayo, enesisindo noma enesigqila ibuye ikhombise isimo esingenakulinganiswa somkhiqizo. Uma isheke ligcinwe, ungazama ukubuyisela izimpahla esitolo, cha - hlehla, ngoba akukho nzuzo emzimbeni kunoma yikuphi amafutha anjalo, ngaphandle kokulimala.
✓ Ibhotela elipakishwe kahle kakhulu kuthengwa ku-foil, kunokuba kufakwe amaphakheji. Futhi khumbula: ngisho nasepaketheni eliphuthumayo, ibhotela igcina ngokuphelele izindawo zalo ezingekho ngaphezu kwamasonto amathathu.
✓ Kunconywa ukuba ungafaki amafutha abuyele efrijini, ngaphandle kwalokho uzolahlekelwa yizinto eziwusizo.
✓ Igama elithi "amafutha" kulebuli (noma ekukhangiseni) akusho ukuthi liphakathi. Ibhotela langempela kufanele lilahleke kakhulu kunemikhiqizo ekwenzeni ama-sandwich nokubhaka. Ukutholakala kohlu olude lwezithako (ikakhulukazi uma kunezidakamizwa ezidumile e-E) futhi okuqukethwe kwamafutha angaphansi kwamaphesenti angu-82.5 yisiginali esicacile kuwe sokuthi kukhona umkhiqizo othile ohlangene, kunokuba ibhotela.
✓ Abakhiqizi baseRussia abanemikhono yemikhiqizo ehlanganisiwe yamafutha babonisa isigaba sokufaka impahla kanye (noma) nokwakhiwa kwezimpahla ezikhiqizwa zona, kodwa ezincwadini ezincane hhayi ngaphambili kwelebuli, kodwa endaweni ethile eceleni noma ngezansi. Ngakho-ke, ngaphambi kokuthenga uhlobo olusha lwegargarine, thatha izimpahla ngesandla futhi ufunde ngokucophelela yonke imibhalo.
✓ Khumbula ukuthi la ma margarine ayizihlabathi, amakamelo okudlela - okubhaka kanye nendawo yonke. Lolu lwazi kufanele lube khona nasemaphaketheni. Kodwa kunoma yikuphi okumele kukhishwe amanothi. Lokhu kubalulekile, ngoba umkhiqizo onamanoni angaphansi kwamaphesenti angama-70 okudoba akufanelekile. I-soft - liquid, in izimbiza zepulasitiki, futhi hhayi kanzima emanzini - margarine ngokuvamile evumelana nanoma iyiphi yalezi zinhloso. Kodwa kuphela uma unayo imargarini ngaphambi kwakho, futhi hhayi omunye umkhiqizo onamafutha.
✓ Ku-margarine okwamanje akumele kube khona ukuhlukanisa kanye nezendlalelo. Ukunambitha lemikhiqizo cishe ifana nebhotela.
Iqiniso lonke mayelana nokulimala kwamasoseji abilisiwe: Ithebula le-Mendeleev ku-isinkwa esibomvu
Indlela yokuhlanza ijaji ekhaya
Amakhambi omphakathi ngokumelene nokudakwa ngokweqile
Amapancake nge-sauce ekhanda
Izimbangela, izimpawu kanye nokwelashwa kwezinqubo zokuvuvukala kulesi sifo
Ungathanda kanjani intombazane endala kunakho
Ungasusa kanjani amabala amhlophe kumazinyo akho
Umlayezo wezindandatho - ukutholakala komshado wesitayela
Izinkinga zomndeni ekukhulisweni kwezingane
Ukuhlukaniswa ngokudlala amakhadi: incazelo yamakhadi, ukukhuluma ngenhlanhla, uthando
Indlela yokuhlukanisa nabashadile: izeluleko zengqondo
Indlela yokuzivikela ebudloveni
Indlela yokwenza ukuvuselelwa kwezindlu
Isobho leTamatato nenkukhu
Utamatisi oboshwe nge-cottage shizi
Izandla zezingane ezisuka epulasitiki
Isaladi "I-Mushroom Glade"